Umshini wokufakelwa kwe-injection, abakhiqizi bomshini wokufakelwa, Umshini wokufakelwa-Hisson-GoFair
South African Zulu Umshini wokufakelwa kwe-injection, abakhiqizi bomshini wokufakelwa, Umshini wokufakelwa
Umshini wokugaya umshini we-plastiki wokufakelwa eplastiki.
I-Hisson Plastic Machinery Co., Ltd ngumkhiqizi wasePhina womshini wokufakelwa epulasitiki, i-PET ibhodlela elithinta umshini wokubumba, i-PET preform molds kanye ne-mold molds, futhi sinikeza umugqa ophelele wokukhiqiza we-PET preforms ukukhiqizwa, amabhodlela e-PET aphefumula nezinye izinto zokukhiqiza kweplastiki . Inkampani yethu inemiphumela engaphezu kwengu-20 emkhakheni wamashini weplastiki, ikakhulukazi i-PET preforms injection kanye nebhola elihlabayo, sinokuhlangenwe nakho okuningi nokukwazi.
Imishini yethu yokwenza umjovo inesitifiketi se-CE, i-PLC Techmation, nezinsimbi eziningi ziyigama elidumile emhlabeni wonke njengoVickers, Scheneider, Yuken, Sumitomo, Omron njll. Amamodeli womshini kusukela ku-96Kusukela ku-1250Isikhathi sokuphoqa.
Sinomshini we-PET we-othomathikhi owenza umshini wokubumba kanye ne-semiauto ye-PET ibhodlela elishaya umshini wokubumba, sinikeza imodeli efanelekayo yemishini ngokusho kwemikhiqizo ehlukene yamabhodlela, kusuka emabhodleleni amancane angama-10ml aphuza amabhodlela amancane angu-5.
Ukuze i-PET preform molds, isango le-valve, uhlobo lokungena emoyeni, umsila omfushane kakhulu kwisandulela sangaphambili, i-max. ama-cavitties kuya ku-72.
Ingqalasizinda ye-Mold kanye nengxenye yensimbi yensimbi ye-S136, isikhunta se-steel frame P20.
Isibumbulu isiqinisekiso esisebenzisa ukuphila kwezigidi ezingu-2, isib. ukusebenzisa impilo, nokugcinwa okuhle, isikhunta singasetshenziswa okungenani iminyaka eyi-10.
고속 PET 병 블로우 성형기, 4- 캐비티 자동 블로우 성형기, PET 블로우 성형기
Цена машине за бризгање, машина за бризгање преформа, машина за бризгање пластике
Cina maniglia stampo, manico in plastica creatore di stampi, stampo in plastica, maniglia macchina d